जसले गाउँछन् ६४ देशका राष्ट्रिय गान « तपाईंको साझा इजलास
जसले गाउँछन् ६४ देशका राष्ट्रिय गान
अहिले अधिक युवा लाल, चार तारे या अरु यस्तै पार्टीका झण्डा बोकेर कुँदिरहेछन्। खुलेरै झण्डा नबोक्नेहरु पनि पार्टीकै भावभंगीमा सामाजिक सञ्जाल र सडकमा छरपष्ट पोखिन्छन्। तर, तीनै भीडमा दैनिक काँधमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर बेकसुर हिँडिरहेका देखिन्छन् एक यात्रु अर्थात् ४१ वर्षीय रामजी नेपाली।
बागलुङको लहरेपिपलमा जन्मिएका नेपाली सानैदेखि गाना बजानामा रुची राख्थे। स्कुल पढ्दा पनि गीत गाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर दर्जनौँ पुरस्कार जित्थे। अहिले उनै नेपाली नेपालसहित ६४ देशका राष्ट्रिय गान गाउन सक्ने भएका छन्। उसो त रामजी कोरोना भयावह सुरु हुनु अघि विभिन्न देशको राष्ट्रिय गानसहित विश्वयात्रामै निक्लिएका थिए। चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको भयावहको समाचारपछि गत वर्षको डिसेम्बरमा बंगलादेश जाने तयारीमा सिलगुडी पुगिसकेका बेला नेपाल फर्किन विवश बने।
बागलुङमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुर्तिकला कार्यशालामा फ्रान्सको राष्ट्रिय गान गाउँदै रामजी नेपाली। साथमा फ्रान्सका चर्चित मुर्तिकार जेबियर गोञ्जालेज।
नेपाल फर्किएर नेपाल भित्रको नेपाल भनेर चिनिने गृह जिल्ला बागलुङ आएका नेपाली अहिले एकान्त प्रकृतिमा रमाउँदै बाँकी देशका राष्ट्रिय गानको अभ्यासमा छन्। उनले नेपालसहित भारत, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान, रसिया, बेल्जियम, रसिया, स्वीजरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, जापान, कोरिया, नेदरल्याण्ड, स्पेन, ब्राजिल, पोर्चुगल, कतार, बहराइन, सिंगापूर, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिब्स, जर्मनी, थाइल्याण्ड, डेनमार्क, मलेसिया लगायत ६४ देशका राष्ट्रिय गीत कण्ठस्थ सुनाउँछन्। निकट समयमै ५० देशको राष्ट्रिय गान गाएर कोरोनाले टुटेको विश्वलाई जोड्ने भर्चुअल सन्देश दिने तयारीमा नेपाली छन्।
उनी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा काँधमा बोकेर पाँच देशका विभिन्न राज्यमा पुगेर राष्ट्रिय गान गाइसकेका छन्। फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन, नेदरल्याण्ड र भारतमा पुगेर गाए। विभिन्न देशमा पुगेर राष्ट्रिय गान गाउँदा उच्च सम्मान मिलेको उनले बताए। सुरुमा बोल्नलाई अप्ठ्यारो मान्नेहरु पनि ती देशको राष्ट्र गान गाएपछि ‘वाउ!’ भनेर सम्मान गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
विश्वको सुरुवाती यात्रामै तिता मिठा सम्झना पनि उनले सँगालिसकेका छन्। गत वर्ष नेपाल भारतबीच सीमा विवाद बढेको थियो। त्यही बेलामा नेपालको झण्डा बोकेर रामजी पश्चिम काँगडा पुगेका थिए। त्यहाँ उनलाई भारतीय प्रहरीले थर्काउदै सोध्यो–तुमे मालुम हं या नही, नेपालमे क्या चल रहा हें, कालपानी मे क्या चल रहा हें। वापस जाओ। आक्रोशित मुद्रामा रहेका उनीहरुलाई नेपालीले नरम स्वर शैलीमा केही भन्दै भारतको राष्ट्र गान जनमन गाएपछि एकाएक उनीहरु नतमस्तक भए। अनि त मलाई के सहयोग चाहिन्छ ? भन्नुस् भन्न थाले। उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मलाई फेरी लाग्यो राष्ट्रिय गानमा कति ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ। टुटेको भावनालाई पनि राष्ट्र गानले जोड्ने काम गर्छ।’
अहिलेसम्म यात्रा गरेर एकै मञ्चमा सबैभन्दा धेरै देशको राष्ट्रिय गान बागलुङको गलकोटस्थित घुम्टे पहाडको फेदमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुर्तिकला कार्यशालामा गाएको नेपाली बताउँछन्। जहाँ गत वर्ष फागुनमा ११ देशका अन्तर्राष्ट्रिय मुर्तिकारहरु आएका थिए। उनीहरुकै बीच नेपालीले ११ देशको राष्ट्रिय गान सुनाए। ती देशका कलाकारहरुले ‘वाह ! आउट ब्रेभ म्यान’ भन्दै हर्ष आँशु बगाए। पहाडको कुनामा पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय गान गुञ्जियो भनेर उनीहरु असाध्यै खुसि देखिएका थिए। त्यो कुराले मलाई आफ्नो सोच, सपना र यात्राप्रति निकै आनन्द र सन्तोष मिल्यो। अब कोरोना सहजतापछि अरु देश जाने उनले बताए।
सन् २०१५ सालदेखि देशका पहिचानका लागि पृथक भुमिका र योगदान दिने सोच र चिन्तनले यस्तो अभियानमा लागेको उनको भनाई छ। विश्वका २ सय ३२ देशमा पुग्ने उनको महत्वकांक्षी लक्ष्य छ। १ सय ९४ देशको राष्ट्रिय गान गाएर विश्वका ७ अरब ७६ करोड मानिसलाई नेपालबारे जानकारी दिने योजना रहेको उनी बताउँछन्। ‘राष्ट्र गान त्यस्तो विषय हो, मैले भारतको गाउँदा एकैसाथ १ अरब ३६ करोड जनतालाई सम्मान गर्न सक्छु, चीनको गाउँदा १ अरब ४३ करोड मानिसलाई सम्मान गर्न सक्छु’ उनले थपे।
राष्ट्रिय गानसहितको विश्वयात्राका क्रममा बुद्धको देश र सगरमाथाको देश नेपालमा घुम्न आउन आव्हान समेत गर्ने गरेका छन्। विश्व बन्धुत्व, सँस्कृति पर्यटन र सद्भावना भन्ने नारा बोकेर हिँडेका उनी विश्व सामु नेपाल चिनाउने, पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने र त्यसमार्फत मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन सकिने बताउँछन्।
अहिले गाउने ६४ देशका राष्ट्रिय गानमध्ये सबैभन्दा गाउन सजिलो कुन ? प्रश्न सोध्न नपाउँदै उनी भन्छन्, ‘सजिलो त नेपालकै भयो। मातृभूमीको टोन। सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ स्वीजरल्याण्डको राष्ट्रिय गान लाग्यो। त्यसको म्युजिक फर्माटमा केही फरक छ, अफविटमा छ। धेरैबेरसम्म फ्लो गरेर गाउन सिकेको हुँ।’ शब्द, संगीत र भावका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो राष्ट्रिय गान कुन देशका लाग्छ ? गायक नेपाली थप्छन्, ‘अमेरिकाकाले बढी शक्ति र उर्जा दिन्छ। त्यसपछि भारतको गानले पनि छुट्टै अनुभव हुन्छ। वीरताको गाथा, उर्जा र प्रेरणा पैदा गर्छ।’ जुनसुकै देशको राष्ट्रिय गान गाउँदा पनि एक प्रकारले भावुक र अर्को हिसाबले साहस उर्जा प्राप्त हुने उनको भनाई छ।
विश्वयात्रा खर्च कसरी ?
गायक नेपाली भन्छन्–‘मसँग देश प्रतिको दायित्व छ, अठोट छ, प्यासन छ। नेपाल र नेपालीको साथ रहनेछ।’ असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भन्ने कुराबाट आफू प्रेरित रहेको उनी बताउँछन्। आफ्नो तर्फबाट गर्ने गरिरहेको छु। धेरैले स्वतःस्फुर्त सहयोग पनि गरिरहेका छन्। यात्राका क्रममा ७ दिनसम्म भोकै पनि बसेको अनुभव उनीसँग छ। ‘आफ्नो सोच अनुसारको सपना पुरा गर्न ठुलो खर्च लाग्छ। झट्ट सोच्दा कठिन छ तर असम्भव छैन’, उनले भने,‘साहसभन्दा पनि दुस्साहस गर्नेहरुले नयाँ इतिहास लेखेको विगत छ। मेरो यो दुस्साहस नै हो।’
कसैले त रामजी बौलायो ? राष्ट्रिय झण्डा बोक्या छ, हिँड्या छ, पागल भयो भन्दा रहेछन्। तर, म अलि कठोर बनेर यो निर्णय लिएको हुँ। ‘पहिले म आफ्नै देशको राष्ट्रिय गान पनि अकमकी अकमकी गाउँथे। अहिले ६४ देशको सहजै गाउन सक्ने भएको छु,’ गायक नेपाली थप्छन्,‘राष्ट्रिय गानमार्फत ३ करोड नेपालीलाई विश्वका ७ अरब मानिससँग जोड्ने प्रयास हो।’ कोरोना भयावहपश्चात आफू यो अभियानमा फेरी निरन्तर लाग्ने नेपालीले बताए।
यसरी राष्ट्रिय गान र विश्वयात्रामा सक्रिय नेपालीको पृष्ठभुमी र मुख्य पेशा गायन हो। ०५२ सालमा ‘घुम्न जाउँला कान्छी बागलुङ बजार’ बोलको गीत गाएका नेपाली यही गीतबाटै गायकको परिचय बनाउन सफल रहे। स्थानीय स्काई ब्याण्डमा आवद्ध रहेर मायाको आधार नामक एल्बम निकालेका उनले हालसम्म १ सय बढी गीतमा आवाज र संगीत भरेका छन्। ०५९ सालमा युवाहरुलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको ‘सपनीमा तानेको गाँजा, अहिले मलाई लाइराछ नमजा’ गीत सर्वाधिक चलेको थियो। उनका श्रीमती कृष्णा परियार चर्चित लोक गायिका हुन्। एक छोरीलाई केही वर्ष अघि क्यान्सरका कारण गुमाइन् भने अहिले नेपाली दम्पतीका साथमा एक छोरी छन्। नेपालीका आमा, बुवा र दुइ भाई छन्।